Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Mandeha be i Marriott any Karaiba sy Mexico: tian'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika izany
Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett dia faly tamin'ny Marriott sy Sunwing Travel Groups ary ny fifanarahana ara-barotra amin'ny fironana izay heveriny fa hanampy amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany.
Vao nanjary mpifaninana vaovao tany Karaiba sy Mexico i Marriott tamin'ny fifanarahana varotra namaky tany tamin'ny Sunwing Group.
Ireo mpilalao fizahan-tany lehibe dia manantena ny hahita fitomboana lehibe amin'ny dia.
Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika Edmund Bartlett dia tia azy ireo matoky an'i Jamaika sy ny vokatra miompana amin'ny rehetra.
Ao anatin'ny fandaharana vaovao, 19 amin'ireo trano fandraisam-bahiny 44 an'ny Sunwing any Mexico sy Karaiba, ao anatin'izany ny Planet Hollywood sy Royalton Hotels, no hanatevin-daharana Fanangonana Autograph an'i Marriott marika tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021.
Fizahan-tany any Jamaika Ny minisitra Hon. Edmund Bartlett dia mankasitraka ireo mpifaninana ao amin'ny Marriott sy Sunwing Travel Group momba ity làlana vaovao amin'ny fifanarahana ara-barotra ity, izay hampiakatra avo roa heny ny portfolio-n'ny Marriott rehetra, ao anatin'izany ireo tany any amin'ny firenena toa an'i Jamaika sy Costa Rica. Nankasitraka ny fifanarahana ny minisitra Bartlett, izay inoany fa fampisehoana fahatokisana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahantany isam-paritra any Karaiba sy Amerika Afovoany.
"Te hiarahaba an'i Marriott sy ny Sunwing Group aho amin'ny fifanarahana varotra ataon'izy ireo, izay azo antoka fa hisy fiatraikany tsara amin'ny fizahan-tany any Jamaika, sy ny toeran-kafa any Karaiba sy Amerika Afovoany," hoy ny minisitra Bartlett.
“Ity fampisehoana fahatokisana ny faritra ity dia fampisehoana fa manantena ny hahita fitomboana lehibe amin'ny dia any amin'ireo toerana halehantsika ireo mpilalao mpilalao fizahan-tany lehibe ireo. Manasongadina ihany koa ny fahatokisan'ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany ao Jamaika sy ny vokatra All Inclusive, fa na eo aza ny areti-mifindra COVID-19, dia vonona ny hanao fifanarahana mifandraika amin'ny fananana any Jamaika sy toeran-kafa, "hoy Andriamatoa Bartlett.
Nasongadiny fa “mahazo tombony lehibe amin'ity fifanarahana ity i Jamaika, satria ny fananan'ny Royalton miorina eo amin'ilay nosy dia haverina amina toeram-pividianana mpanjifa lehibe kokoa, ao anatin'izany ireo mpikambana 145 tapitrisa ao amin'ny programa mahatoky an'i Bonvoy ao amin'ny Marriott.”
“Manantena izahay handray ireo mpitsidika marobe izay hisalasalana fa hisafidy an'i Jamaika ho tanjon'izy ireo amin'ny alàlan'ity fandaminana marketing ity. Ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny masoivohony dia hanohy, miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiray antoka aminay, hanangana fotodrafitrasa ahafahan'ny mpitsidika mankafy traikefa azo antoka, milamina ary azo antoka », hoy ny minisitra.
Nilaza i Marriott fa hampiakatra avo roa heny ny fisian'io faritra io ho an'ny fananana 33 amin'ny 2025 ary hisy fiantraikany manokana amin'ny hotely any Mexico, Dominikana, Jamaika ary Costa Rica, ary koa St. Lucia sy Antigua. Voamarina ihany koa fa ao anatin'ny fifanarahana dia mitazona ny fananana trano fandraisam-bahiny i Sunwing.